Fomba fiheverana ny fomba "Airtime" mety ho ao amin'ny macOS 10.15 | Avy amin'ny mac aho
Fandraisana an-tsaina ny fomba mety hahatonga ny "Airtime" ao amin'ny macOS 10.15
Ny fotokevitra iray momba ny tsaho na ny fivoahana izay tonga taminay tamin'ity herinandro ity dia toa tsy dia azo antoka loatra amin'izao fotoana izao saingy tena tianay tokoa ny hahitana izany fiasa izany amin'ny ekipanay ankehitriny satria avy any Cupertino dia manizingizina ny MacOS "iosification".
Ity dia iray amin'ireo fiasa izay ahafahan'ny mpampiasa maro mampitombo ny vokatra eo alohan'ny Mac noho ny vaovao atolotray antsika. Etsy ankilany, ny zavatra tsara indrindra momba ity «Fotoana fampiasana» ao amin'ny macOS ity dia ny fahitantsika ny fotoana lanin'ny mpianakavinao eo alohan'ny fampiharana iray, nametra fetra ho an'ny fampiharana rehetra ary nanapaka ny fotoana fampiasana na koa mifehy izay pejy afaka ampidirina amin'ny fidirana. Raha fintinina, fitaovana mahaliana iray izay heverina ho tonga miaraka amin'ny kinova macOS vaovao izay ho hitantsika amin'ny WWDC amin'ity taona ity. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: Hanao ahoana ity fitaovana ity amin'ny macOS? Eny, amin'ity foto-kevitra ity dia afaka mahazo hevitra isika.
Ny fotokevitra dia noforonina tamin'ny maody maizina izay tianao indrindra
Ary maro ny mpampiasa no aleony mampiasa ny solosain'izy ireo amin'ny maody maizimaizina ary amin'ny macOS dia efa azontsika efa ela izy io, noho izany ity hevitra noforonin'i Jacob Grozian ity, dia mahatoky amin'izay antenaina hahatratra ny Mac ao amintsika iray volana mahery. Na izany na tsy izany dia mila manizingizina isika fa foto-kevitra izany ary noho izany dia tsy zavatra ofisialy avy any Apple izy io. Ireo no sarin'ity foto-kevitr'ilay fitaovana ity mba hahafahanao maneho hevitra ary mamoaka ny fehin-kevitrao manokana:
Azo antoka fa ny zava-drehetra dia manondro fa hitovy amin'ny fitaovana ananantsika amin'ny iOS izany ary izany no tsy antenaina hisy fiovana lehibe amin'ny asany na amin'ny interface mihitsy aza. Azo antoka fa azonao atao ny manampy sy manamboatra ny fetran'ny fampiasana amin'ny "Fotoana fampiasana" toa ny ataonay amin'ny app ho an'ny iOS, saingy mazava ho azy fa avy amin'ny Mac anay sy ho an'ny macOS. Anisan'ireo mampiasa an'io safidy io amin'ny iOS ve ianao? Mieritreritra ve ianao fa ho toy ny aseho ity hevitra ity sa mieritreritra ianao fa hanova endrika tanteraka ity safidy ity i Apple?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Fandraisana an-tsaina ny fomba mety hahatonga ny "Airtime" ao amin'ny macOS 10.15
Avereno ny Apple Watch anao rehefa very nandritra ny antsasaky ny taona tao amin'ny ranomasina
Ny fiara fitsapana Apple dia very singa